लगातार काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनुपर्दैन ! – Khabar PatrikaNp
August 21, 2020 236
Prevकोरियामा कोरोना सङ्क्रमण पुनः देखियो,
Nextविपतको घडीमा पल शाह पिडितका लागि राहत लिएर गए कालिकोट
ग’स्तीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी प्रहरीमाथि भारतीय त,स्करले ढुं’गामुढा गरे
एक शिक्षकको टाउको काटेर हत्या,गरेर भाग्दै गरे पछि प्रहरीले उनलाई गोली हानि मारे
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33596)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33319)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22501)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20075)
होसियार ! क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ यी ५ खानाको बढी सेवन गर्नाले (19479)